दलित भन्दै यसरि यातना दिएपछी – PathivaraOnline
Home > समाचार > दलित भन्दै यसरि यातना दिएपछी
admin December 23, 2018 समाचार 0
सुर्खेत – चुलो छोएकै निहुँमा कालिकोटमा मनवीर सुनारको हत्या भयो । उनले होटलमा चुरोट सल्काउन मात्र खोजेका थिए । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ ।
स्थानीयले उनीमाथि सामूहिक आक्रमण गरे । उनको ज्यान गयो । यो २०६८ सालको घटना हो ।गत जेठमा नरहरिनाथ गाउँपालिकामा मना सार्कीको हत्या भयो । सार्वजनिक धाराको पानी छोएका कारण उनी मारिइन् ।
उनी वडा नम्बर ९ की सदस्यसमेत थिइन् । धारा छोएको आरोप लगाएपछि विवाद बढ्यो । मध्यरातमा ४५ वर्षीया मनालाई उपल्ला जातिका मान्छेले कुटपिट गरेर हत्या गरे । कर्णालीमा छुवाछुतकै कारण हत्या भएका यी प्रतिनिधि घटना हुन् ।कर्णालीमा दलितमाथि हुने जातीय विभेदका घटना बढिरहेका छन् । जसका कारण मान्छे मारिइरहेका छन्, जिउँदाको जीवन पनि कठिन बनेको छ ।
सरकारी तवरबाट छुवाछुतमुक्त अभियानमा लाखौं बजेट खर्च भइरहेको छ । छुवाछुतविरुद्ध दर्जनौं गैरसरकारी संस्था पनि सक्रिय छन् । तर, कर्णालीका अधिकांश स्थानमा दलितमाथि भान्सामा पसेको, चुल्हो र धारा छोएको निहुँमा आक्रमण रोकिएको छैन । अन्तरजातीय विवाह, मन्दिर प्रवेश र विद्यालयमा हुने विभेदका कारण दलित थप हिंसा भोग्न बाध्य छन् ।चुला छोएकै निहुँमा सुर्खेतको कुनाथरीमा केही समयपहिले एक बालकमाथि निर्मम कुटपिट भयो । कथित उपल्लो जातिको कुटपिटबाट बालक भीमबहादुर विक गम्भीर घाइते भए ।
Wow….केपि ओलिको निर्देशनमा बिमानस्थल यस्तो हुँदै ! पाहुनाहरु चकित …सक्दो शेयर गरौ
नेपाल आइडलको फस्ट रनर अप विक्रम बरालकी गर्लफ्रेण्ड अनु पहिलो पटक भिडियोमा -हेर्नुहोस भिडियो
पूर्वराजा शाहलाई सूर्य थापाको टिप्पणी, जनता होइन, उहाँकै सुपुत्र पारस टुहुरोजस्तो भौतारिएको पनि देख्नुपर्यो!
दिनेशले घटनास्थलमा प्रहरीलाई देखाए भागरथीको हराएका यस्तो बस्तु
बिहेको लागी केटा खोज्दैस् मलाई जुन जातको केटा भएनी हुन्छ, असल र इमानदार चाहियो (मिना)
बि.स.२०७९ ज्येष्ठ १४ गते शनिबार, हेर्नुहाेस् यहाँहरूकाे राशि अनुसारकाे भाग्यफल!